ချစ်ကြည်အေး: ကြိုနှင့်တော့ ဘာလီရေ....
သက်ဝေ Sat Mar 27, 10:26:00 AM GMT+8
မုန့် မုန့် တွေ အများကြီးးးးး ဝယ်ခဲ့ပါ...
:P Sat Mar 27, 10:26:00 AM GMT+8
ယောနက်သန် Sat Mar 27, 10:30:00 AM GMT+8
Haveanice tirp!
မောင်မိုး Sat Mar 27, 10:56:00 AM GMT+8
ဘာလီမှာ နေလှမ်းခဲ့....ပြန်လာရင် ၀က်ပေါင်ခြောက်စားကြမလားဆိုပြီး ဓာတ်ပုံနဲ့ ပို့စ်တင်ပေးပါ။ ဒါဗြဲ။
rose of sharon Sat Mar 27, 11:00:00 AM GMT+8
HAVE A VERY NICE TRIP :)
စာအုပ်လေးဘဲယူသွားပြီး မှတ်တမ်းလေးရေးပေါ့... ပြန်ရောက်မှ ပို့စ်တင်ပေါ့... မျှော်နေမယ်နော်...
Anonymous Sat Mar 27, 11:01:00 AM GMT+8
:) ပျော်ရွှင်ပါစေ အစ်မ..။
ဝက်ဝံလေး Sat Mar 27, 11:01:00 AM GMT+8
အောင်မာ သူက ဘာ ဆိုရင် မချစ်က ဘာာာာာာာာာာာာာ ဆိုပြီး ပြန်အော်လိုက်ပေါ့လို့ အဟီးးး
Thant Sat Mar 27, 11:47:00 AM GMT+8
ဓာတ်ပုံအများကြီးရိုက်ခဲ့နော်......ပြီးရင် ပိုစ်ပြန်တင်... နော်...နော်...နော်...။ (ဒီကစောင့်နေသူ)
Rita Sat Mar 27, 12:34:00 PM GMT+8
ဘာလီရည် သောက်ချင်လို့လားဟင် ဆိုပြီး ဖျော်တိုက်လိုက်ပါလား မမ။
Anonymous Sat Mar 27, 12:51:00 PM GMT+8
အင်ဒိုနီးရှား ပိုလာဘာလီကျွန်းလေးဝယ် သူနဲ့လည်း တွေ့လို့ ချစ်ကြိုးသွယ် (ဒေါ်ချစ် နောက်တစ်သူနဲ့လားဟင်) အဲဒါမှ နောက်တခါ ဘာ....ဆိုတဲ့ အသံကြီး ကြားရအောင်လို့ (စတာပါရှင်)
ဒဏ္ဍာရီ Sat Mar 27, 01:28:00 PM GMT+8
ပိုလာဘာလီ ကို ဖြူသီ သီချင်းလေးနားထောင်ပြီး စိတ်ကူးနဲ့ ရောက်ခဲ့တာ အကြိမ်ပေါင်းမနည်းတော့ဘူး မမရေ......... အခု မမတို့သွားမယ်ဆိုတော့ ရောပြီတောင် ပျော်သွားသေးတယ်။း) လက်ပတော့ မပါလဲ ဘာဖြစ်လဲ မမ ကင်မရာလေးနဲ့ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့နော်...။
ပျော်စရာ ခရီးလေး ဖြစ်ပါစေ မမ...
sosegado Sat Mar 27, 02:09:00 PM GMT+8
ညရောက်ရင် kuta မှာ ပျော်ပေါ့၊ Mount batokaru ကိုရောက်အောင်သွားပါ၊ ကမ်းခြေမှာ ဆံပင်တွေလဲ ကျစ်ခဲ့ဦး၊ အညောင်းလဲဖြေ၊ ဘာလီ အရသာ ခံစားရင်းနှစ်ယောက်ပျော်ရွှင်ပါစေ။
TZA Sat Mar 27, 02:42:00 PM GMT+8
အဲဒီသီချင်းသိတယ်၊ အဲဒီသီချင်းသိတယ်။ မားသားကြီးအရင်က ခဏခဏဆိုတယ်၊ မဟုတ်မှလွဲရော၊ ချစ်ကြည်အေးက မားသားကြီးနဲ့ရွယ်တူပဲဖြစ်ရမယ်။
TZA Sat Mar 27, 02:48:00 PM GMT+8
တတ်နိုင်ဘူး၊ တရုတ်ဗားရှင်းပဲတွေ့တယ်။ လိုက်ဆိုပါချစ်ကြည်အေး။
ချစ်ကြည်အေး Sat Mar 27, 03:07:00 PM GMT+8
မောင်မိုး ဘာ...ဝက်ပေါင်ခြောက်ဟုတ်စ...ဝက်ကောင်လုံးကင် လုပ်စမ်းဘာ...
စာအုပ်၊ ဘောလ်ပင် ၂ချောင်း ထည့်ပြီးသား ရိုစ့်ရေ...
ညီမ သန့်ရေ...စိတ်ချ ကင်မလာ ယူသွားတယ်...ပိုစ့်တွေ တင်အုံးမှာ...
ဟုတ်ပ ညီမ ရီတာရယ် ခုမှ ဘာလီရည် နဲ့မှားသွားမှန်း သိတော့တယ်...
ဆီစိမ်ရေ...ဟ ဟ အချွန်နဲ့ မသူတွေ တယ်များပါ့လား...
ညီမ ဒဏ္ဍာရီရေ...လိုက်ခဲ့လေ...အိတ်က အချောင်ကြီးရယ်...
ကိုတည်ငြိမ်ရေ...အဲဒီ ကူတာBeach မှာ နေမှာ...တောင်ပေါ်လည်း အရောက်သွားခဲ့မယ်...ပြန်လာမှ ပို့စ်တွေထဲမှာ ကြည့်နော်...
ချစ်ကြည်အေး Sat Mar 27, 03:10:00 PM GMT+8
တားတား တီဇီးအာ......ဟုတ်မှာ ဟုတ်မှာ...ညီမလေး ရင်ရင်နဲ့ တတန်းထဲတွေ......:)
အင်ကြင်းသန့် Sat Mar 27, 03:32:00 PM GMT+8
မမ....ပြန်လာရင် မုန့်မစားရရင်နေပါစေ...မမဓါတ်ပုံကိုပဲ မြင်ချင်ပါတယ်...ဒါပဲ :D
(ပျော်ရွှင်စရာ အတိပြီးသော ခရီးဖြစ်ပါစေ မမရေ....)
ကိုဇော် Sat Mar 27, 04:43:00 PM GMT+8
အရာရာ သွားလမ်းခရီး လာလမ်းခရီး ဖြောင့်တန်းပါစေကွယ်...
ဘာလီမှာ ဘာလီရည်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်...
အုန်းရည်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် သောက်ရင်း ဝက်ကောင်လုံး ကင်နိုင်ခဲ့ပါစေ...
သြော်..ငါတော့ ဒီတစ်သက် ဝက်သားပြတ်ပေါ့...ခွိခွိခွိ...
ပြန်လာရင်တော့ ဝက်ကောင်လုံးကင် ပုံလေးတွေ ...အဲ...အဲ...
အစ်မရဲ့ ဓါတ်ပုံ...ဒါလည်း ဟုတ်သေးဘူး...အစ်မရဲ့ ဖိုတိုလေးတွေ နဲ့ ချစ်ကိုကြီးရဲ့ ပုံလေးတွေ တင်ပါဗျို့...
ဇွန်မိုးစက် Sat Mar 27, 09:19:00 PM GMT+8
ဘာလီက အမှတ်တရပစ္စည်းလေးတစ်ခုလောက် လို...ချင်....တယ်....:D
မြစ်ကျိုးအင်း Sat Mar 27, 10:09:00 PM GMT+8
ဏီလင်းညို Sat Mar 27, 11:00:00 PM GMT+8
ဂျစ်တူး ( မုံရွာ ) Sun Mar 28, 07:53:00 AM GMT+8
ဘာလီကျွန်းမှာရင်ခွင်ထဲခွေ့ နေရတာနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်ခဲ့ဖို့ တော့ မမေ့ပါနဲ့ဗျာ-
ရွှေရတုမှတ်တမ်း Sun Mar 28, 11:17:00 AM GMT+8
လုလု Sun Mar 28, 03:49:00 PM GMT+8
သူများကတော့ အင်ဒိုမှာနေရပေမယ့် ဘာလီတော့ မရောက်ဖြစ်ဘဲ ပြန်ရတော့မယ် ဟင့်
မြသွေးနီ Mon Mar 29, 05:05:00 PM GMT+8